Maninona ny mpizahatany no tsy atahorana aorian'ny tranga voamarina fa misy ny Ebola ao Oganda
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maninona ny mpizahatany no tsy atahorana aorian'ny tranga voamarina fa misy ny Ebola ao Oganda
Tsy misy atahorana ireo mpizahatany mandeha any Oganda amin'izao fotoana izao. Ireo mpitsidika amin'ny ho avy mikasa ny ho any amin'ity firenena Afrikana Atsinanana ity dia tsy tokony hieritreritra ny hanafoana. Tranga Ebola naely be dia be androany maraina dia tsy manana vintana mivantana ho fandrahonana ho an'ny mpitsidika raha ny filazan'ny Birao fizahan-tany Oganda. Toa mitoka-monina ny toe-draharaha raha ny fanazavana rehetra voamarina amin'ity tranga ity dia voafehy. Niomana an'izany nandritra ny volana maro i Ogandà ary nanao vaksiny ireo mpiasan'ny fahasalamana 4700 tao amin'ny tobim-pahasalamana 165.
Mailo hatrany anefa ireo matihanina amin'ny dia any Oganda. Mpandraharaha inbound fanta-daza nilaza tamin'ny eTN Alarobia maraina. “Tsy dia tsara loatra izany any Oganda taorian'ny fanamafisana ny fahafatesan'ny olona voan'ny Ebola. Ny zaza maty dia niampita avy tany RD Congo. ”
Ny minisitry ny fahasalamana Ogandà Hon. Aceng Jane Ruth sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia nanamafy tranga iray momba ny aretina Ebola Virus ao Oganda tamin'ny talata ary namoaka fanambarana an-gazety. Taorian'ny valanaretina lehibe kokoa tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo mpifanila vodirindrina aminy, efa nisy fanairana marobe tany Ouganda, saingy ity no tranga voamarina voalohany tany Ouganda nandritra ny valan'aretina Ebola tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo akaiky.
Ny tranga voamarina dia zaza 5 taona avy amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo izay niara-dia tamin'ny fianakaviany tamin'ny 9 Jona 2019. Niditra tao amin'ny firenena tamin'ny alàlan'ny paositra Bwera Border ny zaza sy ny fianakaviany ary nitady fitsaboana tany amin'ny hopitaly Kagando izay misy mpiasan'ny fahasalamana nanondro ny Ebola ho mety antony aretina. Ilay zaza dia nafindra tany amin'ny Bwera Ebola Treatment Unit ho an'ny fitantanana. Ny fanamafisana dia nataon'ny androany tamin'ny Uganda Virus Institute (UVRI). Ilay zaza dia eo ambany fiambenana ary mahazo fitsaboana manohana ao amin'ny Bwera ETU, ary arahi-maso ny fifandraisana.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny WHO dia nandefa ekipa Rapid Response any Kasese hamantatra ireo olona hafa mety tandindomin-doza, ary hiantohana fa harahi-maso izy ireo ary omena fikarakarana raha marary koa izy ireo. Oganda dia efa nanana traikefa tamin'ny fitantanana ny areti-mifindra Ebola. Ho fanomanana tranga mety hafarana mandritra ny fipoahan'ny aretina DRC ankehitriny, Oganda dia nanao vaksiny ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana miisa 4700 ao amin'ny tobim-pahasalamana 165 (ao anatin'izany ny fotodrafitrasa karakarain'ilay zaza); nohamafisina ny fanaraha-maso ny aretina, ary ny mpiasan'ny fahasalamana voaofana amin'ny fanekena ny soritr'aretin'ny aretina. Niorina ny Unitsaboana Ebola.
Ho valin'ity tranga ity dia manamafy ny fanabeazam-pokonolona, ​​ny fanampiana ara-tsaina ny Minisitera ary hanao vaksiny ho an'ireo izay nifandray tamin'ny marary sy ireo mpiasan'ny fahasalamana atahorana izay tsy vita vaksiny teo aloha.
Ny areti-mifindra Ebola dia aretina mafy izay miparitaka amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny tsiranoka amin'ny vatana olona iray voan'ny aretina (tsiranoka toy ny mandoa, diky na ra). Ny soritr'aretina voalohany dia mitovy amin'ny aretina hafa ka mitaky fahasalamana mailo sy ny mpiasan'ny fiarahamonina, indrindra any amin'ny faritra misy ny fifindran'ny Ebola, mba hanampiana amin'ny famaritana aretina. Ny soritr'aretina dia mety ho tampoka ary misy:
Ny fanaintainan'ny muscle
Ireo olona nifandray tamin'olona iray dia atolotra azy ny vaksininy ary angatahina izy ireo hanara-maso ny fahasalamany mandritra ny 21 andro mba hahazoana antoka fa tsy harary koa izy ireo.
Ny vaksinim-panadihadiana ampiasaina ao amin'ny DRC sy ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny laharam-pahamehana any Oganda hatreto dia nahomby tamin'ny fiarovana ny olona tsy ho tratran'ny aretina ary nanampy ireo izay namorona ny aretina hanana vintana kokoa ho velona. Mamporisika mafy ireo izay voamarina fa mifandray ny minisitera mba handray io fepetra fiarovana io.
Ireo mpitsabo amin'ny famotopotorana sy ny fikarakarana lava vonjimaika, miaraka amin'ireo marary mitady fikarakarana mialoha raha vao misy soritr'aretina, mampitombo ny fahafaha-miaina.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia nanao izao hetsika izao mba hifehezana ny fihanaky ny aretina ao amin'ny firenena:
Ny fitantanan-draharahan'ny distrika sy ny filankevitra eo an-toerana any amin'ny faritra voadona dia notoroana antoka fa izay olona manana soritr'aretina sy soritr'aretina Ebola ao amin'ny fiarahamonina dia hotaterina amin'ny mpiasan'ny fahasalamana avy hatrany ary omena torohevitra sy fitiliana.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana dia manangana vondrona ao amin'ny distrika voakasik'izany ary any amin'ny hopitaly fanampiana mba hikarakarana tranga raha misy izany.
Mihamafy ny hetsika fanentanana ara-tsosialy ary aparitaka ny fitaovam-pianarana.
Tsy misy tranga voamarina any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
Ny Minisitera dia miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena izay iarahan'ny World Health Organization.
Miantso ny olon-tsotra sy ny mpiasan'ny fahasalamana ny minisiteran'ny Fahasalamana mba hiara-hiasa akaiky, hiambina ary hifanampy amin'ny fanampiana izay misy soritr'aretina mba hahazo fitsaboana haingana. Hanohy hanavao ny sarambabem-bahoaka momba ny fivoarana sy ny fivoarana vaovao ny Minisitera.
Any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, krizy Ebola no mitohy Dr Mike Ryan, talen'ny fanatanterahana vonjy maika ny fahasalamana, Rob Holden, izay mpitantana ny trangan'aretina Ebola dia nilaza tamin'ny haino aman-jery fa tranga Ebola no nilaza tamin'ny haino aman-jery tamin'ny 5 Jona fa tranga 2,025 ka anisany 1,357 552 maty, 88 ny sisa voamarina tao Kongo. Marihina fa nandritra ny roa herinandro lasa dia nanana tranga vaovao 126 isan-kerinandro izy ireo, midika izany fa ny volana aprily dia XNUMX isan-kerinandro. Milamina ny isa ary raha ny marina dia latsaka tao anatin'ny tapa-bolana lasa izay.
Na izany aza, dia mbola nisy famindrana betsaka ihany koa tany amin'ny faritra maro fahasalamana, ao anatin'izany ny Butembo sy ny Mabalako. Na izany aza, nanamarika ny fihenan'ny fifindran'ny aretina any Katwa ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana, izay no ivon-toerana mafana indrindra tamin'ny herinandro lasa teo. Ka noho izany dia nisy fihatsarana na fihenan'ny fampitana ary etsy ankilany, nisy ireo faritra naharitra.
Ny valanaretina amin'izao fotoana izao dia misy fiatraikany amin'ny faritra ara-pahasalamana 75 any amin'ny faritra fahasalamana 12 any Kivu Avaratra sy Ituri ary hametrahana izany, i Kivu Avaratra sy Ituri dia manana faritry ny fahasalamana 664 amin'ny faritra ara-pahasalamana 48. Nandritra ity valan'aretina ity, faritra ara-pahasalamana 179 no voa tamin'ny ankapobeny ary faritra ara-pahasalamana 22 ka ho hitanao, miaraka amin'ireo faritra ara-pahasalamana 75 izay voakasik'izany ao amin'ny faritra ara-pahasalamana 12, dia maneho dian-jeografika kely kokoa noho ny hitantsika tany am-boalohany.
Tsy faritry ny tanàna i Mabalako fa ambanivohitra; ambany ny hakitroky ny mponina, izay zavatra tsara amin'ny fomba fijery fandefasana fa ny maharatsy ny halavirana dia lava kokoa, ny vondrom-piarahamonina dia any amin'ny toerana ambanivohitra kokoa, sarotra kokoa ny mahita tranga, sarotra ny olona - sarotra kokoa ny mitondra ny olona ivotoerana mitokana ary sarotra ny mahita ny olona rehetra mila vaksiny ka misy ny fifanakalozana eto amin'ny sehatra rehetra.
Kanadianina novonjen'ny SWAT ary nilamina taorian'ny fakana an-keriny tany Ghana
Barbados Fizahan-tany dia manao fanentanana amin'ny fahavaratra any Etazonia sy Kanada
27 minitra lasa izay